» “उत्तरी गोरखालाई छुट्टै जिल्ला बनाउनुपर्छ” -बाबुराम भट्टराई “उत्तरी गोरखालाई छुट्टै जिल्ला बनाउनुपर्छ” -बाबुराम भट्टराई – हाम्रो खबर
“उत्तरी गोरखालाई छुट्टै जिल्ला बनाउनुपर्छ” -बाबुराम भट्टराई
2021, November 13th, Saturday
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उत्तरी गोरखाका धार्चे र चुमनु*ब्रीलाई समेटेर अर्को जिल्ला बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘सुज’ अभियान अन्तरगत शुक्रबार धार्चे गाउँपालिका ४ स्थित लाप्राकमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा भट्टराईले उत्तरी क्षेत्रका दुई वटा गाउँपालिकालाई छुट्टै जि¥ल्ला बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
भौगोलिक रुपमा विकट रहेको उत्तरी क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकालाई अर्को छुट्टै जिल्ला बनाउनुपर्ने डा. भट्टराई बताउँ छन् । उनले भने, ‘गोरखाको उत्तरी भेगलाई एउटा छुट्टै जिल्लाको बनाउने अभियान हामीले चलाउनु पर्छ । त्यसको निम्ति वि*शेष क्षेत्र बनाउन सक्ने भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यो स्वायत्त क्षेत्र भन्ने व्यवस्था पनि छ । जिल्ला, विशेष क्षेत्र वा स्वायत्त जे गर्दा पनि हुन्छ तर जनताले बुझने भनेको जिल्ला नै हो।’
राज्यको हरेक तहमा पहुँच बढाउन र प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै जिल्ला हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकासँगै जनजातीहरुको बाहु¥ल्यता रहेको बारपाक लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर अर्को जिल्ला बनाउनुपर्ने भट्टराईले बताए । ‘आफ्नो सत्ता आफ्नो हातमा नआए सम्म यहाँको विकासका निम्ति जति चिच्याएर कराए पनि तपाइहरुले केही पाउनु हुन्न । जनता समाजवादी पार्टी त पहिले देखि यो संघीयता मिलेको छैन भन्दै आएको छ । यसको निम्ति कांग्रेस, माओवादी, एमाले लगायतको सबै पार्टीहरु एकजुट भएर आउनुपर्छ’ उनले भने ।
उत्तरी गोरखा आर्थिक, सा¥माजिक र राजनैतिक रुपमा धेरै पछाडि परेकाले यहाँको विकासका निम्ति सबै पार्टी एकजुट भई अर्को जिल्ला बनाउन छुट्टै अभियान नै चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘हामीले पहिले देखि नै पहिचान र अधिकार सहित संघीय पुन संच रना हुनुपर्ने भनेर माग गर्दै आएको छौ । त्यसैले यसलाई साझा मुद्धा बनाएर अभियान चलाउ, हामी सबैले संघर्ष र आन्दोलन ग¥यौँ भने यो सम्भव छ’ उनले भने ।
संगठन सुदूढीकरण र जनपरिचालनका साथै जनताको घरदैलो मै पुगी उनीहरुको समस्या बुझन र सोहि अनुसार आगामी चुनावका लागि रणनीति बनाउन ‘सुज’ अभि¥यान संचालन गरिएको समेत उनले जानकारी दिए। कार्यक्रममा डा. भट्टराईको टोली सहित वडा अध्यक्ष राज गुरुङ लगायत स्थानीयहरुको सहभागिता रहेको थियो।